Tara Kelly Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Tara Kelly
A serial innovator, rakaburitswa munyori uye muvambi, mutungamiri uye CEO we SPLICE Software, Tara ane shungu nezve kugona kwehunyanzvi hwekushandura hupenyu huve nani. Akagara achiendesa iko kutenda mukutangisa matekinoroji ayo anowedzera mashandiro, anogonesa zvirinani kuendeswa kwebasa, uye nekuvandudza ruzivo rwevatengi. Izvi zvakatungamira mukugadzirwa kwemakambani matatu evatengi ruzivo uye nekushandura zano rekuvandudza kuita patent, tekinoroji yekudyara iyo inosunga mitsara yedata kuti igadzire yakasarudzika, yakazvimiririra mameseji.
Usarega Bhuti Dzinotaura NezveBrand Yako!
Chishanu, June 1, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Tara Kelly
Alexa, izwi reAmazon-rakagonesa wega mubatsiri, anogona kutyaira anopfuura $ 10 bhiriyoni mumari mumakore mashoma chete. Mukutanga kwaNdira, Google yakati yatengesa zvinopfuura mamirioni matanhatu zvigadzirwa zveGoogle Kumba kubva pakati paGumiguru. Mubatsiri bots senge Alexa uye Hei Google vari kuve chinhu chakakosha chehupenyu hwazvino, uye izvo zvinopa mukana unoshamisa wezvikwata zvekubatana nevatengi papuratifomu nyowani. Shungu dzekugamuchira iwo mukana, zvigadzirwa zviri kumhanyisa